Ma-qajilayaal ,Ma Naxayaal iyo Damiir laawe-yaal ayey Soomaliya iyo Dadkeeda ayey isugu Biyo-shubteen!! • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Ma-qajilayaal ,Ma Naxayaal iyo Damiir laawe-yaal ayey Soomaliya iyo Dadkeeda ayey isugu Biyo-shubteen!!
Waxayddaam laheyn yaad Hilaadinaysaan oo aan lay diran marka
waxa aan u sheegaya Soomaliya iyo Dadkeed inaanay Jamhuuriyada Somaliland iyo ummadeed wakhti ku lumin ee ay ka Faalloodaan Xalada Qalafsan ee ka jira meel kast oo Soomaliya ha uu darnaato Caasimadiina Xamar ee la ,as yahay Maydka la mariyo la doonaayo in la soo aaso.
Meesha meydkii Geerida Xaqa aheyd u timi la la,as yahay meel la mariyo maxay tahay wanaag iyo Nolasha ,Sharafta taal and eeganysaan?, Soomaliya iyo Ummadeeday, bal ka Jawaab haddii dhiig Ibnu Adam iyo Damiir islaan idinku jiro s,uaasha iyada ah, inta and Jamhuuriyada Somaliland soo eegaysan ee aydaan waxba idinka sahan-iyotonan aheyn.
Ummadda Jamhuuriyada Somaliland waligood waa u for Naloshooda iyo ka talinteeda ma ah Ummada loo yeedhiyo waxay doonayaan iyo wax at diidayaan, mana qariyaan Ummada Jamhuuriyada Somaliland wax kasta oo ay diidayaan yihiin sidda idinka oo kale haddii aad tihiin Ummada Soomaliya.
Hadh-cad ayaa Ummadda ka badheedha wax kasta oo ay u aragto in khalad ku jiro mid yar iyo mid weyn halka haddii and tihiin Ummada Soomaliya aad hoos u ooyid-mooyaane aydaan wax kale oo aad leedihiin amma aad sameyn karta jirin .
Mudahaaradka waa qayb ka mid ah, Xoriyadaha iyo for u hadalka Ummada Jamhuuriyada Somaliland iyo Hanaanka aanu kula sheekaysano Madaxadayada kuna soo bandhigno aragtida diidmada ah iyo moda ogolasha ah.
Dhibaatad ay ku nool yihiin iyo dhamacda ay iyagu masuuliyadeed leeyihiin ee dhacdeed iyo dabinteeda ay meel kale oo Ummadii laheyd ka ariminayso ay qooraan sanayaan eega.
Maad ka hadashan xaladaha Galkacayo ka jira iyo kuwii ugu danbeyey dhacay iyo kuwa ay hada ku jirto ee kala qaybsanaanta iyo dilaalka joogta ah ee kuwa doraad lagu gumaaday Dadka aan waxba galabsan walina aan wax laga yidhi iyo cid loo qabtayn aaney jirin. Maad ka hadashaan Xamarta dhag-xaanta Farmaajo? ku kala xidhay aad lugeynaaya mooye aan gaadhi u kala gudbeyn xaqiiqdeed iyo dhabtu tahay ta halkaan ku dooban.
Gebbo-gebbada iyo ugu danbeyntii.
Mudahaaradka yar ee ka dhacay manta gudaha jamhuuriyad Somaliland ah ah mid jebinaya amma baabiinaya jiritaanka Jamhuuriyada Somaliland waxna u dhimayaan .
Marka waxa Ummada Somaliland ka Mudahaaradka Somaliland iyo ummadeed ayey u gaar tahay. Waxa aan idin leeyahay Soomaliya iyo Dadkeedow tiina ayaa huran inaad heeryada duliga ah ee idin saaran inaad iska ridaan.
Reer Somaliland ma ah kuwo waxa idin ku gadaaman loo la idin karro waa u soo jeeda dantooda iyo dalkooda ayaan wakhti idinkaga tegin waxanad lahayn .
Alle Ha idin Garansiiyo waxa idinku waajibka ah wax kale oo aanu nidhaahno garan mayn,e.
Abokor I Mohamud .
Arigtida iyo Fikrad Muwaadinak Jamhuriyad Somaliland